शाकाहारी गर्भवती महिलालाई भिटामिन बी १२ को कमी हुन सक्छ, त्यसैले के गर्ने के नगर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
घरमा यदी कोही गर्भवती भएको छ भने हामी मध्ये धेरैले गर्भवतीलाई माछामासु खान कर गरिरहन्छौँ । पक्कैपनि आउने सन्तती र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले माछामासु खानु अर्थात पौष्टिक तत्व मिलाएर सन्तुलित भोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
गर्भवती महिलले जे खान्छिन् त्यो सिधै पेटमा रहेको बच्चालाई पुग्ने गर्छ । यही कारण डाक्टरहरुले गर्भवतीलाई भरपुर मात्रामा प्रोटिन र भिटामिन खान सल्लाह दिन्छन् । सोच्नुहोस् त यदी कोही शाहाकारी महिला गर्भवती छिन् भने उचित पोषक तत्वको व्यबस्थापन कसरी गर्ने ? , हामी मध्ये धेरैलाईलाई भिटामिन र प्रोटिन माछामासुबाट मात्र पाइन्छ भन्ने भान हुन सक्छ ।
तर यस्तो हैन् , शाकाहारी भोजनबाट पनि गर्भवती महिलाले त्यती नै मात्रामा पौष्टिक तत्व लिन सक्छिन् । शाहाकारी भोजन गर्ने महिलाहरुले प्रोटिनकोलागि दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, बदाम, काजु, किसमिस, पिस्ता, ओखर आदी खानु उपयुक्त हुन्छ ।
जसले गर्दा गर्भमा शिशुको बिकाससंगै शरीरका विभिन्न अंगहरु तथा हड्डि बन्न सहज हुन्छ । प्रोटिनकै अभावका कारण नवजात शिशुहरुमा देखिन धेरै समस्या यी फलफुल तथ दुधजन्य पदार्थले हटाउन सक्छ ।
यस्तै आयरनको पुर्तिकोलागि गर्भवती महिलाले गहुँ, जौँ, मकै जस्ता बस्तुको उपभोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अनि सोयाविन, पनीर, दाल, हरियो सब्जी, आदीमा पनि आयरनको मात्रा हुने हुदाँ यस्ता तरकारी हरेक दिन भान्सामा पकाउदा फाइदा हुन्छ । तर कफि या चिया धेरै सेवन गर्ने बानी छ भने त्यो चाँही हटाउनु पर्छ ।
क्याल्सियम तथा भिटामिन डीको मात्रा पुरा गर्न दुध दही तथा फलफुलको जुस पिउनु उत्तम हन्छ । क्याल्सियमले शिशुको हड्डि बनाउने काम गर्छ । क्याल्सियमको मात्रा कम भएमा शिशु कमजोर हुन्छ । अनि शरीरमा भिटामिन डीको पर्याप्त मात्रा भएमात्रै क्याल्सियमले काम गर्छ ।
गर्भावस्थामा महिलाहरुलाई भिटामिन बी १२ को समेत आवस्यक पर्छ ।
भिटामिन बी १२ निक्कै नै कम शाकाहरी आहारामा पाइन्छ । यही कारण शाकाहरी महिलाहरुमा यसको कमी भएको पाइन्छ । त्यसैले यदी घरमा कोही शाहाकारी महिला गर्भवती छन् भने सोयामिल्क, सोयाबडी तथा भैँसीको दुध समेत सेवन गर्न लगाए यस्को पुर्ति हुन्छ ।
फोलिक एसिड पनि गर्भवती महिलाहरुलाई धेरै आवस्यक तत्व हो । यसकोलागि हरियो पत्ता भएका साग, होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, गेडागुडी र अमिला फलको सेवन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
शरीरलाई स्वस्थ र फिट राख्नका लागि पानीको अहम भूमिका रहेको हुन्छ । मानव शरीरमा पानीको मात्रा ५० देखि ६० प्रतिशत रहेको हुन्छ । पानीले शरीरका अंगहरुको रक्षा गरेको हुन्छ साथसाथै कोषहरुसम्म पोषक तत्व पुगाउन र अक्सीजन पुगाउन काम पनि पानीले गरेको हुन्छ ।
एकछिन सोचौँ, जब एक सामान्य व्यक्तिले पानी पिउनुको यति धेरै महत्व छ भने गर्भवती महिलाका लागि सही मात्रामा पानी पिउनु कति महत्वपूर्ण होला ?
गर्भावस्थाको सुरुवाती चरणमा गर्भ तुहिने समस्या सबैभन्दा धेरै हुन्छ । यसकारण यो समयमा आफ्नो खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र त्यो सँगसँगै पानी कति मात्रामा पिउने भन्ने कुरामा त झनै बढी ध्यान पुगाउन आवश्यक छ ।
गर्भावस्थामा कति पानी पिउने ?
स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार गर्भावस्थाको समयमा एक दिनमा गर्भवती महिलाले लगभग २ देखि ३ लीटर पानी पिउनुपर्छ । स्वासथ्यकर्मीहरुको यो पनि सुझाव छ कि, महिलाहरुले पानीका साथसाथै अन्य झोलीलो पदार्थको सेवन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले गर्भवती महिलाका साथसाथै पेटमा रहेको बच्चाका लागि पनि लाभदायक छ ।
सही मात्रामा पानी भएन भने के असर हुन्छ ?
गर्भवतीको समयमा कम मात्रामा पानी पिउने हो भने महिलाको शरीरको तापमान बिग्रने समस्या हुन्छ । गर्भवती महिलाको शरीर अन्य समयमा भन्दा बढी हीट हुने गर्छ यदी गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा गर्भवती महिलाको शरीरको तापमान नियन्त्रणमा राखिएन भने यसले गर्भ तुहीने समस्या निम्त्याउन सक्ने खतरा रहन्छ ।
गर्भावस्थामा चाहिए जती पानी नपिउने हो भने महिलाहरुमा धेरै प्रकारका इन्फेक्शन हुने संभावना बढेर जान्छ । गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा कम पानी पिउने समस्याले गर्भवती महिलाहरुलाई समयभन्दा अगाबै व्यथा लाग्ने समस्या पनि सुरु हुन सक्छ ।
गर्भावस्थामा कम मात्रामा पानी पिउने कारणले गर्भवती महिला भन्दा बढी गर्भमा रहेको बच्चालाई नकारात्मक असर पर्न सकछ किनभने पानीको मात्रा कम भएमा गर्भवती महिलाको शरीरमा एमनियोटिक द्रव्यको स्तर कम भएर जान्छ ।
एमनियोटिक द्रव्य भ्रूणको चारैतिर रहेको हुन्छ । यसले गर्भमा रहेको शिषुको बाहिरी झट्काबाट सुरक्षित राख्न मद्यत गरेको हुन्छ । गर्भवती महिलाको शररिमा यसको कमी भएमा गर्भमा रहेको बच्चामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसका अलावा यसको कमीका कारण समय नपुगेरै बच्चा जन्मने समस्या रहन सक्छ । पानीका साथसाथै गर्भवती महिलाका लागि झोलीलो पदार्थको सेवन पनि अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
ताजा फलफूलको जुस
ताजा फलफूलको जुसमा भरपुर मात्रमा भिटामिन पाइन्छ, जो गर्भवती महिलाका लागि निकै नै लाभदायक छ । गर्भावस्थाको समयमा कहिल्यै पनि बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका जुसको सेवन हानिकारक हुन सक्छ यसले आमाको साथसाथै पेटमा रहेको बच्चालाई पनि हानि पुगाउँछ ।
त्यसैले ताजा फलफूलको जुस सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । गर्भावस्थामा हरेक दिन एक कप सुप पिउनु पनि उत्तम मानिन्छ । गर्भवती महिलाहरुका लागि नियमित दुध सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ किनकी दुधमा भरपूर मात्रामा प्रोटीन र क्याल्सीएम पाइन्छ ।
गर्भ रहने बित्तिकै महिलाहरु संवेदनशील हुनुपर्छ । गर्भावस्थामा स्त्रीको शरीरमा बच्चा बढिरहेको हुन्छ । यो समयमा बच्चाको विकास हुन्छ । गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिना गर्भवती महिलाले विशेष रुपमा आफ्नो हेरचाह गर्नुपर्छ । यो समयमा गर्भपातको सम्भावना अधिक हुने हुनाले गर्भवती महिले धेरै आराम गर्नुपर्छ । यो समय शरीरमा धेरै परिवर्तन हुने हुँदा गर्भवती महिलाहरुको लागि कठिन हुन्छ ।
यो समयमा गर्भवती महिलाहरुले नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । नियमित व्यायामले गर्भपतन हुने समस्या केहि हदसम्म कम हुन्छ । गर्भावस्थामा महिलाहरुले आफ्नो खानपिनमा पनि विषेश रुपमा ध्यान दिनु पर्छ । अतः गर्भवती महिलाले के खान हुन्छ र के खान हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यसबाट बच्चालाई कस्तो असर पर्न जान्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
Don't Miss it किन आउँछ शरीरमा सेता धर्सा ? आखिर के हुन् यी सेता धर्सा ? थाहापाउनुहोस्
Up Next स्वादको लागी लसुन खाने गर्नुहुन्छ कि स्वास्थ्यको लागी ? जान्नुहोस् यसका फाईदा